ကြေညာချက် – Mawlamyine Daily
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (COVID-19) ရောဂါ ဖွဈပှားခဲ့ရငျ ဘယျလိုနောကျဆကျတှဲရရှေညျဆိုးကြိုးမြား ခံစားရနိုင်ပါသလဲ?
မျောလမွိုငျ၊ ၂၈ သွဂုတျ ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, သတင်း, ကြေညာချက်	Leaveacomment August 29, 2020 1 Minute
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 27, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၂၂ သြဂုတ် ၂၀၂၀ အချက်အလက်စစ်ဆေးသူတွေ ဒီတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့သတင်းအမှားတစ်ခုက “NLD ပါတီ ဖျက်သိမ်းဖို့ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းသေချာသွားပြီ” ဆိုတဲ့ သတင်းအမှားအကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို “မင်းကင်းမြို့နယ် ဟစ်တိုင်” ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ် Public Group မှာ “Soe Paing” အကောင့် က သက်သေပြနိုင်တဲ့ အချက်အလက်အထောက်အထားမပါဘဲ ဩဂုတ် ၁၈ရက်မှာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဩဂုတ် ၂၁ရက် မွန်းလွဲချိန်အထိ Like and React ပြုလုပ်သူ ၇၀၀ကျော်ရှိပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူ ၁၃၀၀ ကျော်အထိ ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်းအမှားဟာ ရွေးကောက်ပွဲကိုဦးတည်ပြီးဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချက်အလက်စစ်ဆေးပြီးသတင်းအမှားဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ သတင်းအမှားလဲလို့ ပြောရတာလဲဆိုရင် NLD ပါတီ … Continue reading NLD ပါတီဖျက်သိမ်းဖို့ ၉၉ရာခိုင်နှုန်း သေချာပြီဆိုတဲ့ သတင်းအမှား →
Mawlamyine Daily	ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Fact Check	Leaveacomment August 22, 2020 1 Minute
မျောလမွိုငျ၊ ၂၁ သြဂုတ် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 21, 2020 1 Minute
ကိုယျဝနျဆောငျ စောငျ့ရှောကျမှုခံယူခွငျး၏ အကြိုးကြေးဇူးတှကေ ဘာတှလေဲ?
မျောလမွိုငျ၊ ၂၀ သြဂုတ် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 20, 2020 1 Minute
အိမျတှငျးလထေုညဈညမျးမှု (Indoor Air Pollution) နှငျ့ပတျသကျပွီး ဘာတှသေိထားရမလဲ?
မျောလမွိုငျ၊ ၁၁ သြဂုတ် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 11, 2020 1 Minute
လူစီးမျောတျောယာဉျမြားအတှကျ ပွညျပတငျသှငျးယာဉျမှတျပုံတငျခ နှုနျးထားမြား ဖွလြှေော့သတျမှတျကွောငျး အသိပေး ကွညော
မျောလမွိုငျ၊ ၈ သြဂုတ် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	စီးပွားရေး, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 8, 2020 1 Minute
မျောလမွိုငျ၊ ၃ သြဂုတ် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ, သတင်း, ကြေညာချက်, Lifestyle	Leaveacomment August 3, 2020 1 Minute